Fiainana mandrakizay - www.yomelijah.com
(Ilay lahatsoratra "Ny fampianarana fototra ao amin'ny Baiboly" dia aorian'ny lahatsoratra "Fiainana mandrakizay")
Fiainana mandrakizay ao amin’ny paradisa eto an-tany (video ao amin’ny Twitter)
Ny fanantenana sy ny fifaliana no tanjaky ny fiaretantsika
"Fa rehefa manomboka mitranga izany, dia mijoroa tsara ka mitrakà satria efa akaiky ny fanafahana anareo"
Rehefa avy nilazalaza ny zava-nitranga manaitra talohan’ny faran’ity fandehan-javatra ity i Jesosy Kristy, tamin’ny fotoana mampahory indrindra iainantsika ankehitriny, nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy Kristy mba ‘hanandratra ny lohany’, satria efa tena akaiky ny fahatanterahan’ny fanantenantsika.
Ahoana no hitazonana ny fifaliana na dia eo aza ny olana manokana? Nanoratra toy izao ny apostoly Paoly fa tsy maintsy manaraka ny modely nomen’i Jesosy Kristy isika: “Koa satria misy an’ireo vavolombelona be dia be toy ny rahona ireo manodidina antsika, dia andao koa isika hanala an’izay rehetra manavesatra antsika sy ny ota mora manakantsakana antsika, ary andao isika hanohy an’ilay hazakazaka asaina ataontsika ka haharitra amin’izany. Sady mihazakazaka isika no mibanjina tsara an’ilay Mpitarika Lehibe Indrindra sady Mpandavorary ny finoantsika, dia i Jesosy. Fa niaritra hazo fijaliana izy noho ilay fifaliana natao teo alohany, ka tsy nampaninona azy ny ho afa-baraka, ary nipetraka teo ankavanan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra izy. Diniho tsara àry ilay niaritra ny teny feno fankahalana nolazain’ny mpanota izay nanimba ny tenany. Amin’izay ianareo dia tsy ho reraka na ho kivy” (Hebreo 12:1-3).
Nanan-kery teo anatrehan’ny olana i Jesosy Kristy tamin’ny alalan’ny hafalian’ny fanantenana napetraka teo anoloany. Zava-dehibe ny misintona hery hamelona ny fiaretantsika, amin’ny alalan’ny “fifaliana” amin’ny fanantenantsika ny fiainana mandrakizay napetraka eo anoloantsika. Raha ny zava-manahirana antsika no resahina, dia nilaza i Jesosy Kristy fa tsy maintsy mamaha azy ireny isan’andro isika: "Izany no antony ilazako aminareo hoe: Aza manahy intsony ny amin’ny ainareo, hoe inona no hohaninareo na hosotroinareo, na manahy momba ny vatanareo, hoe inona no hotafinareo. Tsy sarobidy noho ny sakafo ve ny aina, ary tsy sarobidy noho ny fitafiana ny vatana? Jereo tsara ny voro-manidina: Tsy mba mamafy na mijinja na manangona sakafo ao an-trano fitehirizam-bokatra ireny, nefa manome sakafo azy ilay Rainareo any an-danitra. Tsy sarobidy noho ireny ve ianareo? Iza aminareo no mahay manalava ny androm-piainany, na dia kely aza, rehefa manahy? Nahoana koa ianareo no manahy ny amin’ny fitafiana? Diniho tsara ange ny voninkazo eny an-tsaha e! Tsy miasa mafy na manao kofehy ireny, nefa lazaiko aminareo fa na i Solomona tao amin’ny voninahiny rehetra aza tsy nitafy hoatran’ny iray amin’ireny. Koa raha ny zavamaniry any an-tsaha aza ataon’Andriamanitra mitafy tsara tarehy hoatr’izany, nefa androany ihany ireny no eo, fa rahampitso dia hatsipy any anaty afo, tsy mainka ve ianareo, ry kely finoana? Koa aza manahy mihitsy ianareo hoe: ‘Inona no hohaninay?’, na ‘Inona no hosotroinay?’, na ‘Inona no hotafinay?’ Izany rehetra izany mantsy no tena tadiavin’ny olona eo amin’izao tontolo izao. Fa fantatr’ilay Rainareo any an-danitra fa ilainareo izany rehetra izany" (Matio 6:25-32). Tsotra ny foto-kevitra, tsy maintsy mampiasa ny ankehitriny isika mba hamahana ny olana mahazo antsika, amin’ny fametrahana ny fitokiantsika amin’Andriamanitra, mba hanampiana antsika hahita vahaolana: “Katsaho foana àry aloha ilay Fanjakana sy ny fahamarinan’Andriamanitra, dia homena anareo koa izany rehetra izany. Koa aza manahy mihitsy ny amin’ny ampitso, fa aleo rahampitso no manahy ny amin’ny rahampitso. Efa ampy ny olana mitranga amin’ny andro tsirairay” (Matio 6:33,34). Ny fampiharana an’io fitsipika io dia hanampy antsika hitantana tsara kokoa ny hery ara-tsaina na ara-pihetseham-po hiatrehana ireo olana mahazo antsika isan’andro. Nilaza i Jesosy Kristy fa tsy tokony hanahy be loatra, izay mety hanakorontana ny saintsika sy hanaisotra ny hery ara-panahy rehetra amintsika (Ampitahao amin’ny Marka 4:18,19).
Mba hiverenana amin’ilay fampaherezana voasoratra ao amin’ny Hebreo 12:1-3 , dia tsy maintsy mibanjina ny hoavy amin’ny alalan’ny fifaliana amin’ny fanantenana isika, izay anisan’ny vokatry ny fanahy masina: “Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, hatsaram-panahy, hatsaran-toetra, finoana, fahalemem-panahy, ary fifehezan-tena. Tsy misy lalàna manohitra an’ireo” (Galatiana 5:22,23). Voasoratra ao amin’ny Baiboly fa Andriamanitra falifaly i Jehovah, ary ny Kristianina dia mitory “ny vaovao tsaran’ilay Andriamanitra falifaly.” (1 Timoty 1:11). Na dia ao anatin’ny haizina ara-panahy aza ity tontolo ity, dia tsy maintsy ho ivon’ny fahazavana isika amin’ny alalan’ny vaovao tsara ifampizaràntsika, ary koa amin’ny fifaliana avy amin’ny fanantenantsika izay tiantsika haseho amin’ny hafa: “Ianareo no fahazavan’izao tontolo izao. Tsy azo afenina ny tanàna eny an-tampon-tendrombohitra. Rehefa mandrehitra jiro ny olona, dia tsy mametraka azy ao ambany sobika fa eo amin’ny fitoeran-jiro, mba hanazava an’izay rehetra ao an-trano. Avelao hamirapiratra eo anatrehan’ny olona koa ny hazavanareo, mba ho hitany ny asa tsara ataonareo, ka hanome voninahitra an’ilay Rainareo any an-danitra izy” (Matio 5:14-16). Ity vidéo manaraka ity sy ilay lahatsoratra, miorina amin’ny fanantenana ny fiainana mandrakizay, dia novolavolaina miaraka amin’izao tanjona amin’ny fifaliana feno fanantenana izao: “Mifalia sy miravoravoa, satria lehibe ny valisoanareo any an-danitra. Efa nenjehiny hoatr’izany koa mantsy ny mpaminany talohanareo” (Matio 5:12). Aoka hataontsika fiarovana mafy ny fifalian’i Jehovah: “Aza malahelo, fa ny fifaliana avy amin’i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo.” ( Nehemia 8:10 ).
Fiainana mandrakizay ao amin’ny paradisa an-tany
"ka dia hifaly tokoa ianao" (Deoteronomia 16:15)
Ny fiainana mandrakizay amin'ny alàlan'ny fanafahana ny olombelona amin'ny fatoran'ny ota
"Fa lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana azy, fa hanana fiainana mandrakizay. (...) Izay maneho finoana ny Zanaka dia manana fiainana mandrakizay. Izay tsy mankatò ny Zanaka kosa tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy"
Jesosy Kristy, fony teto an-tany matetika dia nampianatra ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Na izany aza dia nampianatra koa izy fa ny fiainana mandrakizay dia tsy ho azo raha tsy amin'ny finoana ny soron'i Kristy (Jaona 3:16,36). Ny sorona ataon'i Kristy dia mamela fanasitranana sy famerenana amin'ny laoniny ary fitsanganana amin'ny maty koa.
Ireo fitahiana avy amin'ny soron'i Kristy
"Fa toy izany koa ny Zanak’olona: Tsy tonga mba hotompoina izy fa mba hanompo, ka hanome ny ainy ho vidim-panavotana ho takalon’ny maro"
"Koa natsahatr’i Jehovah ny fahorian’i Joba, rehefa nivavaka ho an’ireo namany izy. Ary nomen’i Jehovah avo roa heny noho izay nananany taloha koa izy" (Joba 42:10). Toy izany koa ho an'ny mpikambana rehetra amin'ny vahoaka be, izay ho tafavoaka velona amin'ny Fahoriana Lehibe, dia hitahy azy ireo i Jehovah Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Mpanjaka: "Ambarantsika fa sambatra ireo efa niaritra. Efa renareo ny niaretan’i Joba, ary efa fantatrareo ny fitahiana nomen’i Jehovah azy. Araka izany, dia be fitiavana tokoa i Jehovah sady mamindra fo” (Jakoba 5:11). (Jesosy Kristy Mpanjaka hitahy ny zanak'olombelona)
Ny sorona ataon'i Kristy dia mamela ny famelan-keloka, fitsanganana amin'ny maty, fanasitranana ary famerenana amin'ny laoniny.
(Ny sorona ataon'i Kristy dia mamela ny famelan-keloka, fitsanganana amin'ny maty, fanasitranana ary famerenana amin'ny laoniny)
(Vahoaka marobe amin'ny firenena rehetra no ho tafita velona amin'ny fahoriana lehibe (Apokalypsy 7:9-17))
Ny soron'i Kristy izay hanasitrana ny zanak'olombelona
"Ary tsy hisy mponina hilaza hoe: “Marary aho.” Ho voavela heloka ny olona monina ao amin’ilay tany" (Isaia 33:24).
"Amin’izany fotoana izany, dia hampahiratina ny mason’ny jamba, ary hatao mandre ny sofin’ny marenina. Amin’izany fotoana izany koa dia hahavita hianika tendrombohitra toy ny serfa ny malemy tongotra, ary hihoby ny lelan’ny moana. Fa hisy rano hiboiboika any an-tany efitra, ary hisy renirano any amin’ny lemaka karakaina" (Isaia 35:5,6).
Ny soron'i Kristy no hahatonga anao ho tanora indray
Ny sorona ataon'i Kristy no avelan'ny fitsanganan'ny maty
"Ary maro amin’ireo matory ao amin’ny vovoky ny tany no hifoha" (Daniela 12:2).
"Ary manantena amin’Andriamanitra aho, araka izay antenain’izy ireo koa, fa hisy fitsanganan’ny marina sy ny tsy marina" (Asan’ny Apostoly 24:15).
"Ary nahita seza fiandrianana fotsy lehibe aho, ary hitako ilay nipetraka teo amboniny. Nandositra tsy ho eo anatrehany ny tany sy ny lanitra, ary tsy nisy toerana ho azy ireo. Ary hitako ny maty, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anoloan’ny seza fiandrianana, dia nisy horonam-boky novelarina. Fa nisy horonam-boky iray koa novelarina, dia ny horonam-bokin’ny fiainana. Ary ny maty dia notsaraina araka izay voasoratra tao amin’ireo horonam-boky, araka izay nataon’izy ireo. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy, ary ny fahafatesana sy ny Fasana namoaka ny maty tao aminy, ka samy notsaraina araka izay nataony avy izy ireny" (Apokalypsy 20:11-13).
Ny olona tsy marina natsangana amin'ny maty dia hotsorina amin'ny fihetsika tsara na ratsy ataony, amin'ny paradisa terestrialy ho avy. (Ny fitantanan'ny fitsanganana amin'ny maty eto an-tany; Ny fitsanganana any an-danitra; Ny fitsanganana amin'ny maty eto an-tany)
Ny sorona ataon'i Kristy no ahafahan'ny vahoaka betsaka tafavoaka amin'ny fahoriana lehibe ary hanana fiainana mandrakizay, tsy ho faty
"Taorian’izany, dia nahita aho, ary nisy vahoaka be tsy tambo isaina, avy tamin’ny firenena+ sy foko sy vahoaka ary fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan’ny seza fiandrianana sy teo anatrehan’ny Zanak’ondry, nanao akanjo fotsy lava, ary nisy sampana palmie teny an-tanany. Niantsoantso mafy tsy an-kijanona izy ireo, nanao hoe: “Ny famonjena dia azontsika avy amin’Andriamanitsika, izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, sy avy amin’ny Zanak’ondry.”
Ary ny anjely rehetra dia nijoro nanodidina ny seza fiandrianana sy ny anti-panahy ary ny zavamananaina efatra, ka niankohoka teo anoloan’ny seza fiandrianana sady nivavaka tamin’Andriamanitra, nanao hoe: “Amena! Ho an’Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay anie ny dera sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny tanjaka! Amena.”
Koa hoy ny anti-panahy iray tamiko: “Iza moa ireo manao akanjo fotsy lava ireo, ary avy aiza izy ireo?” Koa namaly azy avy hatrany aho hoe: “Ianao no mahalala, tompoko.” Ary hoy izy tamiko: “Ireo no avy tamin’ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry. Izany no antony ijoroany eo anoloan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra. Ary manao fanompoana masina ho azy andro aman’alina ao amin’ny tempoliny izy ireo. Ary Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana dia hamelatra ny tranolainy eo ambonin’izy ireo. Tsy ho noana na hangetaheta intsony ireo, ary tsy hamely azy ny masoandro na ny hafanana mandoro, satria ny Zanak’ondry, izay eo akaikin’ny seza fiandrianana, dia hiandry azy ireo toy ny ataon’ny mpiandry ondry, ka hitarika azy ho any amin’ny loharanon’ny ranon’aina. Ary hofafan’Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin’ny masony.”" (Apokalypsy 7:9-17). (Vondron'olona maro sy firenena sy fiteny maro be no ho tafita velona amin'ny fahoriana lehibe)
Ny fanjakan'Andriamanitra no hitondra an'izao tontolo izao
"Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra taloha sy ny tany taloha, ary tsy nisy ranomasina intsony. Hitako koa ilay tanàna masina, dia i Jerosalema Vaovao, nidina avy any an-danitra avy any amin’Andriamanitra sady efa voaomana tahaka ny ampakarina mihaingo hihaona amin’ny vadiny. Tamin’izay aho dia nahare feo mafy avy teo amin’ny seza fiandrianana, nanao hoe: “Eo amin’ny olombelona ny tranolain’Andriamanitra, ary izy hiara-mitoetra amin’izy ireo, ary ireo ho olony, ka Andriamanitra mihitsy no ho eo aminy. Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha”" (Apokalipsy 21:1-4) (ny fitantanana eto an-tany ny Fanjakan'Andriamanitra; ny Printsy; ny Pretra; Ireo Levita)
"Mifalia amin’i Jehovah ry olo-marina, ary miravoravoa. Mihobia ianareo rehetra mahitsy fo!" (Salamo 32:11)
Ho velona mandrakizay ny marina ary ho ringana ny ratsy fanahy
"Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no handova ny tany" (Matio 5:5).
"Rehefa afaka kelikely, dia tsy hisy intsony ny ratsy fanahy. Handinika an’izay nisy azy ianao, nefa tsy ho eo intsony izy. Fa ny mpandefitra kosa no handova ny tany, Ka tena ho finaritra amin’ny fiadanam-be. Manao tetika hamelezana ny olo-marina ny ratsy fanahy, Ka mihidy vazana aminy. Hihomehezan’i Jehovah anefa izy, Satria hitany fa ho avy ny andro handringanana azy. Manatsoaka sabatra ny ratsy fanahy, sady mamatotra ny tadin tsipìkany, Mba handavoana ny ory sy ny mahantra, Ary hamonoana an’ireo manao izay mahitsy. Ny sabany ihany anefa no hitsatoka amin’ny fony, Ary ho tapaka ny tsipìkany. (...) Ho tapaka ny sandrin’ny ratsy fanahy, Fa i Jehovah kosa hanampy ny olo-marina. (...) Ho ringana ny ratsy fanahy, Ary ny fahavalon’i Jehovah dia ho tahaka ny hakanton’ny kijana, Izay tsy maintsy ho levona. Eny, ho levona ireny ka ho lasa setroka. (...) Ny olo-marina no handova ny tany, Ka honina eo mandrakizay. (...) Aoka ianao hanantena an’i Jehovah sy hanaraka ny lalany, Dia hanandratra anao izy ary handova ny tany ianao. Ho hitanao ny handringanana ny ratsy fanahy. (...) Diniho ny tsy manan-tsiny, ary jereo ny olo-mahitsy, Fa fiadanana no miandry azy amin’ny hoavy. Ho ripaka daholo kosa ny mpandika lalàna, Ary fandringanana no miandry ny ratsy fanahy, amin’ny hoavy. Avy amin’i Jehovah ny famonjena ny olo-marina, Izy no fiarovana mafy ho azy ireo amin’ny fotoam-pahoriana. Hanampy sy hanafaka azy ireo i Jehovah. Hanafaka azy tsy ho azon’ny ratsy fanahy izy ka hamonjy azy, Satria nialoka taminy ireo" (Salamo 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).
"Amin’izay dia handeha amin’ny lalan’ny olona tsara toetra ianao, ary hizotra eo amin’ny lalan’ny olo-marina. Fa ny olo-mahitsy no honina amin’ny tany, ary ny tsy manan-tsiny ihany no ho sisa tavela eo. Fa ny ratsy fanahy kosa ho ringana tsy ho amin’ny tany, ary ny mpivadika hesorina tsy ho amin’ny tany. (...) Hahazo fitahiana ny olo-marina, fa fikasana hampiasa herisetra kosa no fonosin’ny tenin’ny ratsy fanahy. Ny fahatsiarovana ny olo-marina dia hitondra fitahiana ho azy, fa ho lo kosa ny anaran’ny ratsy fanahy" (Ohabolana 2:20-22; 10:6,7).
Hitsahatra ny ady ary hisy fiadanam-po am-po sy amin'ny tany rehetra
"Efa renareo fa voalaza hoe: ‘Tiavo ny namanao ary ankahalao ny fahavalonao.’ Izaho kosa anefa milaza aminareo hoe: Tiavo foana ny fahavalonareo, ary mivavaha foana ho an’izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny Rainareo izay any an-danitra ianareo. Izy mantsy mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mandatsaka ny orana amin’ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona no valisoa azonareo? Tsy mba manao toy izany koa ve ny mpamory hetra? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo, inona no mampiavaka ny ataonareo amin’ny ataon’ny hafa? Tsy mba manao toy izany koa ve ny olona eo amin’izao tontolo izao? Koa tsy maintsy lavorary ianareo, tahaka ny Rainareo any an-danitra izay lavorary" (Matio 5:43-48).
"Raha mamela ny heloky ny olona ianareo, dia hamela ny helokareo koa ny Rainareo any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny heloky ny olona kosa ianareo, dia tsy hamela ny helokareo koa ny Rainareo" (Matio 6:14,15).
"Fa hoy i Jesosy taminy: “Avereno amin’ny tranony ny sabatrao, fa ho fatin’ny sabatra izay rehetra mampiasa sabatra"" (Matio 26:52).
"Avia ianareo hijery ny asan’i Jehovah. Manao zava-mahagaga eto an-tany izy. Mampitsahatra ady hatrany amin’ny faran’ny tany izy. Tapatapahiny ny tsipìka, ary potipotehiny ny lefona. Dorany ny kalesin’ady" (Salamo 46:8,9).
"Ary hamoaka didim-pitsarana eo amin’ireo firenena izy, ka hanitsy izay tsy mety eo amin’ireo vahoaka. Dia hanefy ny sabany ho angadinomby izy ireo, ary ny lefony ho antsy fandrantsanam-boaloboka. Tsy hanainga sabatra hifamely ny firenena, ary tsy hianatra ady intsony" (Isaia 2:4).
"Izao no tsy maintsy hitranga any am-parany: Ny tendrombohitra misy ny tranon’i Jehovah dia ho mafy orina sady ho avo noho ny tampon’ireo tendrombohitra, ka hasandratra ho avo noho ireo havoana. Ary hitanjozotra ho any ny olona. Maro ny firenena ho any, ka hanao hoe: “Avia! Andao isika hiakatra ho any an-tendrombohitr’i Jehovah sy ho any an-tranon’Andriamanitr’i Jakoba. Hampianatra antsika ny lalany izy, ary handeha amin’ny atorony isika.” Fa avy ao Ziona no hivoahan’ny lalàna, ary avy ao Jerosalema ny tenin’i Jehovah. Ary hamoaka didim-pitsarana eo amin’ny firenena maro izy, ka hanitsy izay tsy mety eo amin’ireo firenena matanjaka any lavitra. Dia hanefy ny sabany ho angadinomby izy ireo, ary ny lefony ho antsy fandrantsanam-boaloboka. Na izy ireo, na ireo firenena dia samy tsy hanainga sabatra hifamely. Ary tsy hianatra ady intsony koa izy ireo. Dia samy hipetraka eny ambanin’ny voalobony sy ny aviaviny izy, ary tsy hisy hampangovitra azy, fa ny vavan’i Jehovah Tompon’ny tafika no efa niteny" (Mika 4:1-4).
Ho be ny sakafo manerana ny tany
"Hahavokatra be ny tany, Ary na eny an-tampon-tendrombohitra aza dia ho be ny vokatra. Ho betsaka toy ny any Libanona ny vokatry ny taniny, Ary hiroborobo toy ny ahitra amin’ny tany ny olona ao an-tanàna" (Salamo 72:16).
"Hanome ranonorana ho an’ny voa afafinao amin’ny tany Izy, ary sakafo matavy sy mahavoky no ho vokatry ny tany. Hiraoka ahitra eny amin’ny kijana malalaka tsara ny biby fiompinao, amin’izany andro izany" (Isaia 30:23).
Ny fahagagana nataon'i Jesoa Kristy, hatanjaka ny finoana amin'ny fanantenana fiainana mandrakizay
"Misy zavatra maro hafa koa nataon’i Jesosy, ary raha nosoratana tamin’ny an-tsipiriany daholo izy ireny, dia ataoko fa na izao tontolo izao aza tsy ho omby ny horonam-boky voasoratra” (Jaona 21:25)
Jesosy Kristy sy ny fahagagana voalohany voasoratra ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona, dia nanova ny rano ho divay Izy: “Tamin’ny andro fahatelo, dia nisy fanasambe tao Kana, any Galilia, fa nisy fampakaram-bady. Tao amin’io fanasambe io ny renin’i Jesosy. Nasaina ho any amin’ilay fanasambe tamin’io fampakaram-bady io koa i Jesosy sy ny mpianany. Rehefa lany ny divay, dia hoy ny renin’i Jesosy taminy: “Tsy manana divay intsony ry zareo.” Hoy anefa i Jesosy: “Aleo isika tsy miditra amin’izany, ravehivavy. Mbola tsy fotoana tokony hanaovako zavatra izao.” Hoy ny reniny tamin’ireo mpanompo: “Ataovy daholo izay teneniny anareo.” Ary nisy sinibe vato enina fitoeran-drano teo. Nilaina mantsy izany araka ny lalàna momba ny fidiovana narahin’ny Jiosy. Indroa na intelon’ny siny no nahafeno ny sinibe tsirairay. Hoy i Jesosy tamin’ny mpanompo: “Fenoy rano ireo sinibe ireo.” Dia nofenoin’ireo hatreo amin’ny molony izany. Hoy i Jesosy avy eo: “Tovozy amin’izay, dia itondray ny mpiandraikitra ny fanasana.” Nentin’ireo tany aminy àry ilay izy. Ary nanandrana an’ilay rano niova ho divay ilay mpiandraikitra, nefa tsy fantany hoe avy aiza ilay izy—fa ireo mpanompo nanovo ny rano no nahafantatra.—Dia nantsoin’ilay mpiandraikitra ilay mpampakatra, ka hoy izy taminy: “Ny an’ny olona rehetra, ny divay tsara aloha no aroso, ary rehefa mamo ny olona vao aroso ny ratsiratsy. Ny anao indray ny divay tsara no notehirizinao hatramin’izao.” Tany Kana, any Galilia, i Jesosy no nanao fahagagana voalohany. Ary nasehony ny voninahiny ka nino azy ny mpianany” (Jaona 2:1-11).
Nanasitrana ny zanaky ny mpanompon’ny mpanjaka i Jesosy Kristy: “Tonga tany Kana any Galilia indray izy avy eo, tany amin’ilay nanovany rano ho divay. Ary nisy tandapa nanana zanakalahy narary tany Kapernaomy. Henon’io lehilahy io fa niala tany Jodia i Jesosy ary tonga tany Galilia. Dia nandeha tany amin’i Jesosy izy, ka niangavy azy hidina any Kapernaomy mba hanasitrana an’ilay zanany efa ho faty. Hoy anefa i Jesosy: “Tsy hino mihitsy ve izany ianareo, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana?” Dia hoy ilay tandapa: “Mba andao re, Tompo ô, dieny mbola tsy maty ny zanako.” Hoy i Jesosy: “Mandehana fa velona ny zanakao.” Nino ny tenin’i Jesosy ilay lehilahy ka lasa nandeha. Tamin’izy mbola teny an-dalana niverina hody iny, dia nitsena azy ny mpanompony ka niteny taminy hoe velona ilay zanany. Nanontaniany àry izy ireo hoe tamin’ny firy ilay zanany no nihatsara. Dia hoy izy ireo: “Omaly tamin’ny ora fahafito izy no tsy nanavy intsony.” Dia fantatr’ilay rainy fa tamin’izay ora izay mihitsy i Jesosy no niteny taminy hoe: “Velona ny zanakao.” Lasa mpino àry izy sy ny ankohonany manontolo. Izany no famantarana faharoa nataon’i Jesosy tamin’izy niala tany Jodia ka tonga tany Galilia” (Jaona 4:46–54).
Nanasitrana lehilahy iray nisy demonia tao Kapernaomy i Jesoa Kristy: “Dia nidina tany Kapernaomy, tanàna any Galilia, izy. Ary nampianatra ny olona tamin’ny Sabata izy, ka gaga ny olona tamin’ny fomba fampianany, satria niteny toy ny olona manana fahefana izy. Ary nisy lehilahy nipetrahan’ny fanahy maloto, na demonia, tao amin’ny synagoga. Nikiakiaka mafy izy hoe: “Fa inona koa no anelingelenanao anay atỳ, ry Jesosy avy any Nazareta? Tonga atỳ ve ianao mba handringana anay? Fantatro tsara ange fa ianao Ilay Masin’Andriamanitra e!” Niteny mafy azy anefa i Jesosy hoe: “Mangìna, dia mivoaha aminy!” Koa nivoaka ilay demonia rehefa avy nampianjera an’ilay lehilahy teo afovoan’ny olona, nefa tsy nandratra azy. Dia gaga izy rehetra ka nifampiresaka hoe: “Misy heriny be mihitsy ny teniny! Tena manana fahefana sy hery izy, fa na ny fanahy maloto aza baikoiny fotsiny dia mivoaka!” Koa niely nanerana ny faritra manodidina ny vaovao momba azy” (Lioka 4:31–37).
Nandroaka demonia i Jesosy Kristy tany amin’ny tanin’ny Gadarena (ny Jordana ankehitriny, ny ilany atsinanan’i Jordana, akaikin’ny farihin’i Tiberiasy): “Rehefa tonga teny ampita tao amin’ny faritra nisy ny Gadareanina izy, dia nifanena tamin’ny lehilahy roa nisy demonia. Nivoaka avy teny am-pasana izy roa lahy ireo, ary faran’izay nahery setra ka tsy nisy sahy nandalo tamin’izany lalana izany. Dia niantsoantso mafy izy ireo hoe: “Fa inona koa no anelingelenanao anay atỳ, ry Zanak’Andriamanitra? Tonga atỳ ve ianao mba hampijaly anay alohan’ny fotoana?” Ary nisy kisoa be dia be nandrasana, teny lavidavitra teny. Niangavy azy àry ireo demonia hoe: “Raha avoakanao izahay, dia mba alefaso ho ao amin’irỳ andian-kisoa irỳ.” Ary hoy izy tamin’ireo: “Mandehana!” Nivoaka àry izy ireo ka lasa niditra tao amin’ireo kisoa ireo. Dia ireny fa nirifatra nankeny amin’ny hantsana ilay andiany manontolo, dia nivarina tany an-dranomasina ka maty an-drano. Nandositra nankany an-tanàna kosa ireo mpiandry kisoa ka notantarainy daholo izay nitranga, anisan’izany ny momba an’ireo lehilahy nisy demonia. Dia nivoaka hitsena an’i Jesosy daholo ny iray tanàna. Rehefa hitan’izy ireo i Jesosy, dia niangaviany hiala tao amin’ilay faritra” ( Matio 8:28-34 ).
Nanasitrana ny rafozambavin'ny apôstôly Petera i Jesosy Kristy: "Nony niditra tao an-tranon’i Petera i Jesosy, dia nahita ny rafozambavin’i Petera teo am-pandriana fa nanavy. Koa nokasihin’i Jesosy ny tanany, ka niala tamin-dravehivavy ny fanaviany. Ary niarina izy ka nikarakara an’i Jesosy" (Matio 8:14,15).
Nanasitrana lehilahy maty tanana i Jesoa Kristy: “Tamin’ny sabata hafa indray, dia niditra tao amin’ny synagoga izy ary nampianatra. Ary nisy lehilahy maty tanana ankavanana tao. Nijery tsara an’i Jesosy ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo raha hanasitrana azy izy na tsia, mba hahitana antony hiampangana azy. Sabata mantsy tamin’izay. Fantatr’i Jesosy anefa ny eritreritr’izy ireo, ka hoy izy tamin’ilay lehilahy maty tanana: “Mitsangàna dia mijoroa etsy afovoany etsy.” Dia nitsangana izy ka nijoro teo. Dia hoy i Jesosy tamin’izy ireo: “Manontany anareo aho: Inona no azo atao amin’ny Sabata: Ny manao soa sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina sa ny mamono olona?” Rehefa avy nijery an’ireo rehetra nanodidina azy teo izy, dia niteny tamin’ilay lehilahy hoe: “Atsory ny tananao.” Dia nataony izany ka sitrana ny tanany. Romotry ny hatezerana anefa izy ireo, ka niara-nikaon-doha hoe ahoana no hatao amin’i Jesosy” (Lioka 6:6–11).
I Jesoa Kristy dia manasitrana lehilahy mararin’ny manirano (edema, fivondronan’ny ranon-javatra be loatra ao amin’ny vatana): “Nandeha nisakafo tao an-tranon’ny anankiray tamin’ny lehiben’ny Fariseo i Jesosy, indray Sabata, ary nijery azy tsara ny olona tao. Ary io fa nisy lehilahy voan’ny aretina manirano teo anoloan’i Jesosy. Nanontanian’i Jesosy àry ireo nahay Lalàna sy ny Fariseo hoe: “Azo atao sa tsia ny manasitrana amin’ny Sabata?” Tsy niteny tsy nivolana anefa izy ireo. Koa nataon’i Jesosy teo amin’ilay lehilahy ny tanany ary nositraniny izy, dia nasainy nandeha. Hoy izy avy eo: “Raha latsaka ao anaty lavadrano ny zanakareo na ny ombinareo, dia iza aminareo no tsy hisintona azy hivoaka avy hatrany, na dia Sabata aza ny andro?” Koa tsy nahita havaly izy ireo” (Lioka 14:1-6).
Nanasitrana lehilahy jamba iray i Jesosy Kristy: "Raha nanakaiky an’i Jeriko izy, dia nisy lehilahy anankiray jamba nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Nandre vahoaka be nandalo ilay lehilahy, ka nanontany izay anton’izany. Ary hoy ny olona: “Jesosy avy any Nazareta no mandalo!” Dia niantso mafy ilay jamba hoe: “Mba iantrao aho, ry Jesosy Zanak’i Davida ô!” Ary niteny mafy azy mba hangina izay nandeha teny aloha, fa vao mainka izy niantsoantso mafy hoe: “Mba iantrao aho, ry Zanak’i Davida ô!” Dia nijanona i Jesosy ka nasainy nentina teo aminy ralehilahy. Rehefa nanatona ralehilahy, dia nanontany azy i Jesosy hoe: “Inona no tianao hataoko aminao?” Hoy izy: “Tompo ô, mba ataovy mahita indray aho.” Koa hoy i Jesosy: “Aoka ianao hahita indray, ny finoanao no nahasitrana anao.” Ary avy hatrany dia nahita indray ralehilahy, ka nanomboka nanaraka an’i Jesosy ary nanome voninahitra an’Andriamanitra. Dia nidera an’Andriamanitra koa ny olona rehetra nahita izany" (Lioka 18:35-43).
Jesosy Kristy dia nanasitrana jamba roa: “Rehefa niala teo i Jesosy, dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy sady niantsoantso mafy hoe: “Mba iantrao izahay, ry Zanak’i Davida ô!” Nankeo aminy ireo jamba ireo rehefa tafiditra tao an-trano izy, ka nanontanian’i Jesosy hoe: “Mino ve ianareo fa mahavita an’izany aho?” Hoy izy ireo: “Eny, Tompoko.” Dia nokasihiny ny mason’izy ireo, sady hoy izy: “Ho tanteraka aminareo anie izany, satria manam-pinoana ianareo!” Dia lasa nahita ny mason’izy ireo. Noraran’i Jesosy mafy anefa izy ireo hoe: “Tandremo sao misy mahafantatra an’izao!” Notantarain’izy ireo eran’ilay faritra anefa ny momba azy, rehefa tafavoaka an’ilay trano izy ireo” (Matio 9:27–31).
Nanasitrana moana marenina i Jesosy Kristy: "Ary niala tao amin’ny faritr’i Tyro i Jesosy, ka nandalo an’i Sidona sy namakivaky ny faritr’i Dekapolisy dia tonga tany amin’ny Ranomasin’i Galilia. Ary nentin’ny olona teo aminy ny lehilahy iray marenina sady niraiki-dela, ka niangavian’izy ireo izy mba hametra-tanana taminy. Dia nentin’i Jesosy nitokana lavidavitra ny vahoaka ilay lehilahy. Ary nampidiriny tao an-tsofin’ilay lehilahy ny rantsantanany, ka nandrora izy, dia avy eo nokasihiny ny lelan’ilay lehilahy. Ary nijery ny lanitra izy sady nisento lalina, ka niteny tamin’ilay lehilahy hoe: “Efata”, izany hoe: “Misokafa.” Tonga dia lasa nandre ilay lehilahy, ary tsy niraiki-dela intsony izy ka nanomboka nahay niteny tsara. Ary noraran’i Jesosy ny olona mba tsy hiresadresaka an’izany. Arakaraka ny nandrarany azy ireo anefa no vao mainka niresahan’izy ireo an’ilay izy. Fa tena gaga be mihitsy izy ireo ka niteny hoe: “Tsara daholo izay rehetra ataony. Vitany mihitsy aza ny mahatonga ny marenina handre sy ny moana hiteny.”" (Marka 7:31-37).
Nanasitrana boka i Jesoa Kristy: "Nisy boka nanatona azy koa, izay niangavy azy, eny, nandohalika ary nanao taminy hoe: "Nisy boka koa tonga teo aminy, ka nandohalika sady niangavy azy mafy hoe: “Raha mba sitrakao fotsiny mantsy ny hanadio ahy, dia ho vitanao izany.” Koa nangoraka azy izy ka nanatsotra ny tanany sady nikasika azy, ary niteny taminy hoe: “Sitrako tokoa. Madiova ianao.” Koa afaka taminy avy hatrany ny habokana, ka nanjary nadio izy" (Marka 1:40-42).
Ny fanasitranana ireo boka folo: “Nandalo teo anelanelan’i Samaria sy Galilia izy, rehefa nankany Jerosalema. Rehefa niditra tao amin’ny tanàna kely iray izy, dia nisy boka folo lahy nifanena taminy. Nijoro teny lavidavitra teny izy ireo, ary niantso mafy hoe: “Ry Jesosy Mpampianatra ô, mba iantrao izahay!” Rehefa nahita azy ireo izy, dia niteny hoe: “Mandehana miseho any amin’ny mpisorona.” Dia lasa izy ireo, ka nadio raha mbola teny an-dalana. Rehefa hitan’ny anankiray fa sitrana izy, dia lasa izy niverina ka nanome voninahitra an’Andriamanitra tamin’ny feo avo. Dia niankohoka teo an-tongotr’i Jesosy izy, ka nisaotra azy. Samaritanina izy io. Koa niteny i Jesosy hoe: “Tsy efa voadio daholo moa izy folo? Fa aiza ny sivy? Dia tsy mba nisy niverina hanome voninahitra an’Andriamanitra afa-tsy ity hafa firenena ity ve?” Hoy izy avy eo: “Mitsangàna dia mandehana. Ny finoanao no nahasitrana anao.”” (Lioka 17:11–19).
Nanasitrana lehilahy iray tsy afaka mandeha i Jesoa Kristy: "Nisy fetin’ny Jiosy taorian’izany, ka niakatra tany Jerosalema i Jesosy. Ary any Jerosalema, eo akaikin’ny vavahadin’ondry, dia misy dobo atao amin’ny teny hebreo hoe Betesda, izay misy lala-mitafo dimy. Tao no nandrian’olona maro be, dia ny marary, ny jamba, ny malemy tongotra, ary ny kilemaina. Ary nisy lehilahy efa narary nandritra ny valo amby telopolo taona koa tao. Nahita azy nandry teo i Jesosy, ary nahalala fa efa ela no naharariany, ka hoy izy taminy: “Te ho sitrana ve ianao?” Dia namaly ilay marary hoe: “Tsy mba misy olona mametraka ahy ao anaty dobo, tompoko, rehefa mihetsika ny rano. Fa raha vao manatona aho, dia misy olona misosoka midina eo alohako.” Hoy i Jesosy: “Mitsangàna, batao ny fandriananao ka mandehana.” Dia sitrana avy hatrany ilay lehilahy, ary nobatainy ny fandriana keliny ka nandeha izy” (Jaona 5:1-9).
Nanasitrana mararin’ny androbe i Jesosy Kristy: “Rehefa nankeo amin’ny vahoaka izy ireo, dia nisy lehilahy nanatona azy ka nandohalika teo anatrehany sady niteny hoe: “Tompo ô, mba iantrao ny zanako lahy fa voan’ny androbe, dia marary izy izao. Matetika izy no mianjera ao anaty afo, ary matetika ao anaty rano. Nentiko tatỳ amin’ny mpianatrao izy, saingy tsy vitan’izy ireo ny nanasitrana azy.” Ary hoy i Jesosy: “Ry taranaka tsy manam-pinoana sy ratsy fanahy, mandra-pahoviana aho no tsy maintsy mbola hijanona eto aminareo? Mandra-pahoviana aho no tsy maintsy handefitra aminareo? Ento atỳ amiko izy.” Notenenin’i Jesosy mafy avy eo ilay demonia ka nivoaka tamin’ilay ankizilahy. Dia sitrana tamin’izay ora izay ilay ankizilahy. Ary nanatona an’i Jesosy mitokana ny mpianany ka nanontany hoe: “Fa maninona no tsy vitanay ny namoaka an’iny?” Dia hoy izy tamin’ireo: “Satria ianareo kely finoana! Lazaiko marina aminareo fa raha manana finoana ianareo, na faran’izay kely hoatran’ny voan-tsinapy aza, ka hiteny amin’irỳ tendrombohitra irỳ hoe: ‘Mifindrà erỳ’, dia hifindra ilay izy. Ary tsy hisy tsy ho vitanareo.”” (Matio 17:14-20).
Nanao fahagagana i Jesosy Kristy nefa tsy fantany: “Koa nandeha i Jesosy, ary nifanesika teo aminy ny vahoaka. Ary nisy vehivavy iray nandeha ra efa nandritra ny 12 taona, nefa tsy nisy nahasitrana azy mihitsy. Nanatona an’i Jesosy avy tao aoriana izy, ka nikasika ny mikiramborambo amin’ny morontongotry ny akanjony ivelany, dia nijanona avy hatrany ilay ra. Hoy àry i Jesosy: “Iza no nikasika ahy teo?” Nanda anefa ny rehetra, dia hoy i Petera: “Mpampianatra ô, vahoaka be ange no manodidina anao sady mifanesika aminao e!” Fa hoy i Jesosy: “Nisy olona nikasika ahy teo, satria tsapako fa nisy hery niala tamiko.” Hitan’ilay vehivavy fa nisy nahatsikaritra izy, ka nanatona izy sady nangovitra dia nandohalika teo anatrehany. Ary notantarainy teo imason’ny olona rehetra ny antony nikasihany azy sy ny fomba nahasitrana azy teo no ho eo. Hoy anefa i Jesosy taminy: “Ny finoanao no nahasitrana anao, anaka. Mirary soa ho anao aho!”” (Lioka 8:42–48).
Manasitrana avy lavitra i Jesosy Kristy: “Niditra tao Kapernaomy i Jesosy, rehefa tapitra izay tokony holazainy tamin’ny vahoaka. Ary nisy manamboninahitra iray nanana mpanompo tena tiany, nefa narary mafy efa ho faty ilay mpanompo. Koa rehefa nandre ny momba an’i Jesosy ilay manamboninahitra, dia nisy anti-panahin’ny Jiosy nirahiny ho any amin’i Jesosy, mba hangataka azy ho avy ka hanasitrana an’ilay mpanompo. Dia tonga tany amin’i Jesosy izy ireo ary niangavy mafy azy hoe: “Mendrika ny hanaovanao an’izany izy, satria tiany ny firenentsika sady nanorina synagoga teto aminay izy.” Nandeha niaraka tamin’izy ireo àry i Jesosy. Rehefa tsy lavitra an’ilay trano anefa izy, dia efa nisy naman’ilay manamboninahitra nirahiny hilaza taminy hoe: “Aza misahirana mankatỳ amiko, tompoko, fa tsy mendrika ny handray anao ao an-tranoko aho. Na izaho aza tsy mieritreritra hoe mendrika hankeny aminao. Fa mitenena fotsiny, dia ho sitrana ny mpanompoko. Izaho koa mantsy eo ambany fahefan’olona, sady manana miaramila eo ambany fahefako. Dia raha miteny amin’ny miaramila anankiray aho hoe: ‘Mandehana!’, dia lasa izy, ary amin’ny anankiray kosa hoe: ‘Avia!’, dia tonga izy, ary amin’ny mpanompoko hoe: ‘Ataovy ity!’ dia ataony izany.” Gaga i Jesosy rehefa naheno an’izany, ka nitodika tany amin’ny vahoaka nanaraka azy, ary niteny hoe: “Lazaiko aminareo fa mbola tsy nahita finoana lehibe hoatr’izany aho, na teo amin’ny Israely aza.” Rehefa niverina tany an-tranon’ilay manamboninahitra ireo olona nirahiny ireo, dia nahita fa efa salama tsara ilay mpanompo” (Lioka 7:1-10).
Nanasitrana vehivavy sembana nandritra ny 18 taona i Jesosy Kristy: “Ary nampianatra tao amin’ny synagoga anankiray i Jesosy tamin’ny Sabata. Ary io fa nisy vehivavy nisy fanahy ratsy teo. Narary nandritra ny 18 taona izy noho io fanahy io, ka nanjoko be ary tsy afa-nitraka mihitsy. Niantso azy i Jesosy rehefa nahita azy, ka niteny hoe: “Ravehivavy, afaka amin’ny aretinao ianao!” Dia nametra-tanana taminy izy, ka tonga dia nitraka ilay vehivavy ary nanome voninahitra an’Andriamanitra. Tezitra anefa ny mpitantana an’ilay synagoga noho i Jesosy nanasitrana tamin’ny Sabata, ka hoy izy tamin’ny vahoaka: “Enina andro no natao hiasana, ka amin’ireo andro ireo ianareo no tokony ho tonga hositranina, fa tsy amin’ny andro sabata.” Namaly azy anefa ny Tompo hoe: “Ry mpihatsaravelatsihy, tsy samy mamaha ny ombiny na ny ampondrany avy ve ianareo amin’ny Sabata, dia mitondra azy hisotro rano? Efa nafatotr’i Satana nandritra ny 18 taona be izao koa ity vehivavy zanak’i Abrahama ity. Koa tsy tokony hovahana ve izy mba tsy ho voafatotra hoatr’izany intsony amin’ny andro sabata?” Ary menatra daholo ny mpanohitra azy rehefa nilaza an’izany izy. Fa faly kosa ny vahoaka manontolo noho ny zavatra mahagaga rehetra nataon’i Jesosy” (Lioka 13:10–17).
Jesosy Kristy dia nanasitrana ny zanakavavin’ny vehivavy fenisianina iray: “Dia niala teo i Jesosy ka nankany amin’ny faritr’i Tyro sy Sidona. Ary iny fa nanatona azy ny vehivavy fenisianina iray avy ao amin’ilay faritra, sady niantsoantso mafy hoe: “Mba iantrao aho, ry Tompo Zanak’i Davida ô! Mijaly be ny zanako vavy fa misy demonia.” Tsy namaly an’ilay vehivavy mihitsy anefa izy. Nanatona azy àry ny mpianany ka niteny taminy hoe: “Asaivo mandeha any izy fa miantsoantso foana ao aorianantsika ao.” Dia hoy i Jesosy: “Ho any amin’ny ondry very amin’ny taranak’Israely ihany no nanirahana ahy.” Nanatona azy anefa ilay vehivavy, dia niankohoka teo anatrehany sady nilaza hoe: “Tompo ô, ampio aho!” Ary hoy izy: “Tsy mety raha alaina ny mofon-jaza ka atsipy ho an’ny alikakely.” Hoy anefa ilay vehivavy: “Marina izany, Tompo ô! Fa ny alikakely koa ange mba mihinana ny poti-mofo latsaka avy amin’ny latabatry ny tompony e!” Dia hoy i Jesosy taminy: “Ravehivavy, lehibe ny finoanao. Ho tanteraka aminao anie izay irinao!” Dia sitrana tamin’izay ora izay ilay zanany vavy” (Matio 15:21–28).
Nampitsahatra tafiotra i Jesosy Kristy: "Nony niakatra tao an-tsambokely izy, dia nanaraka azy ny mpianany. Ary nanjary nisamboaravoara be ny ranomasina, ka saron’ny onja tsikelikely ilay sambokely. Natory anefa i Jesosy. Nanatona àry izy ireo ka namoha azy, sady niteny hoe: “Tompo ô, vonjeo fa ho faty isika!” Hoy anefa izy tamin’ireo: “Nahoana ianareo no saro-tahotra, ry kely finoana?” Koa niarina izy, ary noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina ka nanjary tony dia tony ny andro. Ary talanjona ireo ka niteny hoe: “Fa olona manao ahoana loatra àry izy ity, fa hatramin’ny rivotra sy ny ranomasina aza mankatò azy?”" (Matio 8:23-27). Io fahagagana io dia mampiseho fa any amin'ny paradisa an-tany dia tsy hisy intsony ny tafio-drivotra na tondra-drano izay hiteraka loza.
Jesosy Kristy nandeha teny ambonin’ny ranomasina: “Rehefa avy nandrava ny vahoaka izy, dia niakatra irery tany an-tendrombohitra mba hivavaka. Dia izy irery no tany rehefa maizina ny andro. Efa lasa lavitra be ilay sambokely tamin’izay, ary niezaka mafy hanohitra ny onja ny mpianatra satria notoherin’ny rivotra ilay sambo. Tamin’ny fotoam-piambenana fahefatra tamin’ny alina anefa, dia nandeha teo ambony ranomasina izy mba ho eny amin’ny mpianatra. Dia natahotra ny mpianatra rehefa nahita azy nandeha teo ambony ranomasina, ka niantsoantso mafy hoe: “Misy zavatra hafahafa iny!” Tonga dia niteny taminy anefa i Jesosy hoe: “Mahereza fa izaho ihany ity! Aza matahotra.” Dia hoy i Petera taminy: “Tompo ô, raha ianao tokoa io, dia asaivo manatona anao eny ambony rano aho.” Hoy izy: “Avia àry!” Dia nidina avy tao an-tsambokely i Petera, ka nandeha teo ambony rano ary nanatona an’i Jesosy. Lasa natahotra anefa izy rehefa nijery an’ilay tafio-drivotra. Dia nanomboka nilentika izy, ka niantsoantso hoe: “Tompo ô, vonjeo aho!” Tonga dia nanatsotra ny tanany i Jesosy ka nitazona an’i Petera, sady hoy izy: “Ry kely finoana, fa maninona ianao no lasa nisalasala?” Ary nitsahatra ilay tafio-drivotra rehefa tafakatra tao an-tsambokely izy ireo. Dia niankohoka teo anatrehany izay tao an-tsambokely, sady niteny hoe: “Zanak’Andriamanitra tokoa ianao.”” (Matio 14:23–33).
Ny jono mahagaga: “Nijoro teo amoron’ny farihin’i Genesareta i Jesosy indray mandeha, ary nifanesika teo aminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra. Ary nahita sambokely roa niantsona teo amoron’ilay farihy izy. Tsy tao amin’ireo sambokely anefa ny mpanarato fa efa lasa nanasa ny haratony. Koa niakatra tao amin’ny iray tamin’ireo sambokely ireo i Jesosy. An’i Simona ilay izy, ary nangataka taminy izy mba hihataka kely amin’ny morony. Dia nipetraka izy, ary nampianatra ny vahoaka avy tao amin’ilay sambokely. Rehefa tapitra ny teniny, dia hoy izy tamin’i Simona: “Mandrosondrosoa any amin’ny lalina, ary alatsaho ny haratonareo dia hahazo trondro ianareo!” Hoy anefa i Simona: “Mpampianatra ô, efa niasa mafy nandritra ny alina izahay, saingy tsy nahazo na inona na inona. Noho ny teninao anefa, dia halatsako ihany ny harato.” Nahazo trondro be dia be izy ireo rehefa nanao an’izany, ka rovitra mihitsy ny haratony. Nanao fihetsika àry izy ireo hiantsoana ny namany teny amin’ilay sambokely iray mba ho tonga hanampy azy. Dia tonga izy ireo ary nofenoiny ny sambokely roa, ka saika nilentika mihitsy. Rehefa nahita an’izany i Simona Petera, dia nandohalika teo anoloan’i Jesosy, ka niteny hoe: “Tompo ô, mandehana fa aza manakaiky ahy fa mpanota aho.” Gaga be mantsy izy sy ireo niaraka taminy satria be dia be ny trondro azony. Gaga be koa i Jakoba sy Jaona, zanak’i Zebedio, izay niara-niasa tamin’i Simona. Hoy anefa i Jesosy tamin’i Simona: “Aza matahotra, fa manomboka izao dia olona velona no ho azonao.” Koa nentin’izy ireo niverina teny an-tanety ny sambokely ary nilaozany ny zava-drehetra, dia lasa izy ireo nanaraka azy” (Lioka 5:1-11).
Jesosy Kristy dia nampitombo ny mofo: “Taorian’izay, dia nankany ampitan’ny Ranomasin’i Galilia, na Ranomasin’i Tiberiasy, i Jesosy. Ary nisy vahoaka be nanaraka azy teny foana, satria hitan’izy ireo ny famantarana mahagaga nataony, tamin’izy nanasitrana ny marary. Niakatra teo an-tendrombohitra àry i Jesosy, dia nipetraka teo niaraka tamin’ny mpianany. Efa akaiky ny Paska tamin’izay, izany hoe ny fetin’ny Jiosy. Rehefa nitazana i Jesosy, dia hitany fa nisy vahoaka be nanatona azy, ka hoy izy tamin’i Filipo: “Aiza isika no hividy mofo hohanin’ireo olona ireo?” Fantany anefa izay efa hataony, fa mba te hitsapa an’i Filipo izy. Dia hoy i Filipo: “Na mofo azon’ny 200 denaria aza ange mbola tsy ho ampy, na dia samy omena sombiny kely fotsiny aza ny olona e!” Ary hoy ny mpianany anankiray, dia i Andrea, rahalahin’i Simona Petera: “Intỳ misy ankizilahikely manana mofo dimy sy trondro madinika roa. Izany anefa ve dia ho ampy an’ireo olona be dia be ireo?” Hoy i Jesosy: “Asaivo mipetraka ny olona.” Be bozaka teo, ka nipetraka ny olona. Ary nisy lehilahy 5 000 teo ho eo tao amin’ilay vahoaka. Nalain’i Jesosy àry ny mofo, dia nanao vavaka fisaorana izy, ary avy eo nozarainy tamin’ireo olona nipetraka teo ilay izy. Hoatr’izany koa no nataony tamin’ny trondro madinika, ka samy nihinana an’izay laniny ny olona. Rehefa voky izy ireo, dia hoy izy tamin’ny mpianany: “Angony ny sombintsombiny sisa tsy lany mba tsy hisy ho verivery fotsiny.” Dia nangonin’izy ireo izany, ka nahafeno harona 12 ny sombintsombiny sisa tsy lanin’ny olona nihinana tamin’ny mofo dimy. Rehefa hitan’ny olona ny famantarana nataon’i Jesosy, dia hoy izy ireo: “Io mihitsy ilay Mpaminany ho tonga amin’izao tontolo izao.” Ary fantatr’i Jesosy fa efa ho avy izy ireo haka azy an-keriny mba hatao mpanjaka. Dia niala teo izy ka nandeha nitokana tany an-tendrombohitra indray” (Jaona 6:1–15). Hisy hanina tondraka eran’ny tany rehetra (Salamo 72:16; Isaia 30:23).
Nanangana tovolahy i Jesosy Kristy: "Taoriana kelin’izay, dia nankany amin’ny tanàna atao hoe Naina izy, ary nisy vahoaka be niara-dia taminy, ankoatra ny mpianany. Rehefa nanakaiky ny vavahadin’ny tanàna izy, dia nisy faty nentina nivoaka, izay zanaka lahitokan-dreniny, ary efa mpitondratena koa ravehivavy. Ary nisy vahoaka be avy ao an-tanàna niaraka tamin-dravehivavy. Raha vao nahita azy ny Tompo, dia nangoraka azy ka nanao taminy hoe: “Aza mitomany intsony.” Dia nanatona izy ka nikasika an’ilay filanjana faty ary nijanona ny mpilanja. Koa hoy izy: “Ry tovolahy, hoy aho aminao: Miarena!” Dia niarina ny maty ary nanomboka niteny, ka natolotr’i Jesosy an-dreniny. Ary raiki-tahotra ny rehetra ka nanome voninahitra an’Andriamanitra nanao hoe: “Mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika”, sy hoe: “Mitsinjo ny vahoakany Andriamanitra.” Dia niely eran’i Jodia sy ny faritra rehetra manodidina izany vaovao momba azy izany” (Lioka 7:11-17).
Natsangan'i Jesosy Kristy tamin'ny zanakavavin'i Jairo: "Ary raha mbola niteny izy, dia nisy olona tonga avy any an-tranon’ilay mpitantana ny synagoga nilaza hoe: “Maty ny zanakao, fa aza manahirana ny mpampianatra intsony.” Ren’i Jesosy izany, ka hoy izy: “Aza matahotra! Minoa fotsiny dia ho voavonjy izy.” Rehefa tonga teo amin’ilay trano i Jesosy, dia tsy nisy navelany hiditra afa-tsy i Petera sy Jaona sy Jakoba ary ny ray aman-drenin’ilay zazavavy. Nitomany daholo ny olona sady nikapo-tratra noho ny alahelony an-drazazavavy. Koa hoy i Jesosy: “Aza mitomany intsony, fa tsy maty izy fa matory.” Dia nihomehezan’ireo izy, satria fantatr’izy ireo fa maty razazavavy. Nandray ny tanany anefa i Jesosy, ka niantso hoe: “Ry zazavavy, miarena!” Dia nody indray ny ainy, ka niarina avy hatrany izy ary nasain’i Jesosy nomena hanina. Ary faly loatra ny ray aman-dreniny, kanefa tsy navelan’i Jesosy hilazalaza tamin’olona momba izay nitranga izy ireo" (Lioka 8:49-56).
Jesosy Kristy dia nanangana an'i Lazarosy namany izay efa maty efatra andro lasa izay: "Mbola tsy tonga tao an-tanàna anefa i Jesosy, fa mbola teo amin’ilay nitsenan’i Marta azy. Rehefa nahita an’i Maria nitsangana avy hatrany sy lasa nandeha ireo Jiosy niaraka taminy tao an-tranony sy nampionona azy, dia nanaraka azy satria noheveriny fa nandeha hitomany tany am-pasana izy. Nony tonga teo amin’i Jesosy i Maria, dia niankohoka avy hatrany teo amin’ny tongony raha vao nahita azy, ka nanao hoe: “Tompo ô, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko.” Nalahelo mafy i Jesosy tao am-pony tao sady ory dia ory, rehefa nahita an’i Maria sy ireo Jiosy niaraka taminy nigogogogo nitomany. Dia hoy izy: “Aiza no nametrahanareo azy?” Hoy ireo: “Tompo ô, andao jereo!” Ary nirotsaka ny ranomason’i Jesosy. Koa hoy ny Jiosy: “Lehibe tokoa izany fitiavany azy izany!” Hoy anefa ny sasany: “Tsy hain’io lehilahy nampahiratra ny mason’ny jamba io ve ny nisakana an’ity iray ity tsy ho faty?”
Nalahelo mafy indray i Jesosy tao am-pony tao, ary nankeo amin’ny fasana izy, avy eo. Lava-bato ilay izy, ary nisy vato niankina taminy. Ary hoy i Jesosy: “Esory ny vato.” Fa hoy i Marta, anabavin’ny maty: “Tompo ô, tsy maintsy maimbo izy izao, satria efa efatra andro izay.” Hoy i Jesosy: “Tsy efa nilazako moa ianao fa raha mino ianao, dia hahita ny voninahitr’Andriamanitra?” Dia nesorin’ireo ilay vato, ary niandrandra ny lanitra i Jesosy, ka nanao hoe: “Misaotra anao aho, Ray ô, fa efa nihaino ahy ianao. Fantatro fa mihaino ahy foana ianao, fa noho ireto vahoaka mijoro manodidina ahy ireto no nilazako izany, mba hinoany fa ianao no naniraka ahy.” Rehefa avy nilaza izany izy, dia niantso mafy hoe: “Ry Lazarosy, mivoaha!” Dia nivoaka ilay lehilahy efa maty, mbola nisy fehim-paty ny tongony aman-tanany, ary nisy fehy lamba ny tarehiny. Hoy i Jesosy tamin’ny olona: “Vahao izy, ka avelao handeha”" (Jaona 11:30-44).
Ny jono mahagaga farany (fotoana fohy taorian’ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty): “Raha vao maraina anefa ny andro, dia nijoro teo amin’ny torapasika i Jesosy, nefa tsy tonga saina ny mpianatra hoe i Jesosy io. Ary hoy i Jesosy: “Manana zavatra azo hanina ve ianareo, anaka?” Dia namaly izy ireo hoe: “Tsy manana!” Hoy izy: “Atsipazo eo ankavanan’ny sambokely ny harato fa hahazo ianareo.” Dia natsipin’izy ireo ilay harato, ka tsy zakany nampiakarina satria be loatra ny trondro. Avy eo dia hoy ilay mpianatra tian’i Jesosy tamin’i Petera: “Ny Tompo io!” Vao henon’i Simona Petera fa ny Tompo io, dia nanaovany ny akanjony ivelany, satria tsy niakanjo izy. Dia nitsoraka tao anaty ranomasina izy. Ny mpianatra hafa kosa nandeha tamin’ilay sambokely, sady nisintona an’ilay harato feno trondro. Tsy lavitra ny tanety mantsy no nisy azy ireo, fa tany amin’ny 90 metatra teo ho eo fotsiny” (Jaona 21:4-8).
Nanao fahagagana maro hafa i Jesoa Kristy. Manamafy orina ny finoantsika izy ireo ary mandrisika antsika ary mahita maso ireo fitahiana maro ho tonga eto an-tany. Ny teny nosoratan'ny apôstôly Jaona dia manisa tsara ny fahagagana maro nataon'i Jesosy Kristy, ho antoka iray hitranga eto an-tany: "Misy zavatra maro hafa koa nataon’i Jesosy, ary raha nosoratana tamin’ny an-tsipiriany daholo izy ireny, dia ataoko fa na izao tontolo izao aza tsy ho omby ny horonam-boky voasoratra” (Jaona 21:25).
Ny fampianarana fototra ao amin'ny Baiboly
Andriamanitra manana anarana hoe: Jehovah: "Izaho no Jehovah! Izany no anarako. Koa ny voninahitro tsy homeko ny hafa, ary ny fiderana ahy tsy homeko ho an’ny sary sokitra" (Isaia 42:8) (The Revealed Name). Tsy maintsy mivavaka an'i Jehovah irery ihany isika: "Mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery ianao, Jehovah ô, eny, ry Andriamanitray ô, satria namorona ny zava-drehetra ianao, ary noho ny sitraponao no nampisy sy namoronana azy ireny" (Apokalypsy 4:11). Tokony ho tia Azy amin'ny herintsika rehetra isika: "Dia hoy i Jesosy taminy: “Tiavo i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny sainao manontolo.’ Izany no didy lehibe indrindra sady voalohany" (Matio 22:37,38). Andriamanitra dia tsy Andriamanitra telo izay iray. Ny Andriamanitra telo izay iray tsy fampianarana Baiboly izany (Worship Jehovah; In Congregation).
Jesosy Kristy no hany Zanak'Andriamanitra, amin'ny heviny hoe Izy no hany Zanak'Andriamanitra, noforonin'Andriamanitra mivantana: "Ary nanontany ny mpianany i Jesosy nony tonga tao amin’ny faritr’i Kaisaria-Filipo, nanao hoe: “Lazain’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona?” Dia hoy ireo: “Ny sasany milaza hoe Jaona Mpanao Batisa, ny hafa hoe Elia, ary misy koa manao hoe Jeremia na ny iray amin’ny mpaminany.” Ary hoy izy taminy: “Fa ianareo kosa milaza hoe iza aho?” Dia hoy ny navalin’i Simona Petera: “Ianao no Kristy, Zanak’ilay Andriamanitra velona.” Ary hoy ny navalin’i Jesosy azy: “Sambatra ianao, ry Simona zanak’i Jona, satria tsy nofo aman-dra no nampiharihary izany taminao, fa ny Raiko any an-danitra" (Matio 16:13-17, Jaona 1:1-3). Jesosy Kristy dia tsy Andriamanitra Tsitoha ary tsy anisan'ny Andriamanitra telo izay iray (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
Ny fanahy masina no hery ampiasain'Andriamanitra. Tsy olona izy: "Ary nisy lela maro toy ny afo niseho tamin’izy ireo, ary nizarazara ireny ka nisy iray avy nankeo ambonin’ny tsirairay" (Asa 2:3). Ny Fanahy Masina dia tsy anisan'ny Trinite.
Ny Baiboly dia Tenin'Andriamanitra: "Ny Soratra Masina iray manontolo dia avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra, ary mahasoa mba hampianarana, hananarana, hanitsiana izay diso, hanafaizana araka ny fahamarinana, mba hahatonga ny olon’Andriamanitra ho tena mahay sy ho ampy fitaovana tsara ho amin’ny asa tsara rehetra" (2 Timoty 3:16-17). Tsy maintsy mamaky izany isika, mandalina izany, ary mampihatra izany eo amin'ny fiainantsika: "Fa ny lalàn’i Jehovah no mahafinaritra azy, Eny, ny lalàny no vakiny moramora andro aman’alina. Ho toy ny hazo nambolena eo amoron’ny rano mikoriana izy, Dia hazo mamoa amin’ny fotoanany, Ary tsy mba malazo ny raviny. Hahomby daholo izay ataony" (Salamo 1:1-3) (Read The Bible Daily).
Ny soron'i Kristy ihany no mamela ny famelana ny fahotana sy ny fanasitranana ary ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny maty: "Fa lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana azy, fa hanana fiainana mandrakizay. (...) Izay maneho finoana+ ny Zanaka dia manana fiainana mandrakizay. Izay tsy mankatò ny Zanaka kosa tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy" (Jaona 3:16,36, Matio 20:28) (Fahatsiarovana; The Release).
Ny Fanjakan'Andriamanitra dia fitondram-panjakana any an-danitra, izay napetraka tany an-danitra tamin'ny 1914, ary ny Mpanjaka dia i Jesosy Kristy niaraka tamin'ny mpanjaka sy mpisorona 144 000 izay "Jerosalema Vaovao", ilay ampakarin'i Kristy. Io fitondram-panjakan'Andriamanitra any an-danitra io dia hamarana ny fitondran'olombelona amin'izao fotoana izao mandritra ny fahoriana lehibe, ary hiorina amin'ny tany: "Amin’ny andron’ireo mpanjaka ireo, dia hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay ilay Andriamanitry ny lanitra, ary tsy ho lasan’olon-kafa izany fanjakana izany. Hotorotoroin’izy io sy hofoanany ireo fanjakana rehetra ireo, fa izy kosa haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra" (Apokalypsy 12:7-12, 21: 1-4, Matio 6:9,10, Daniela 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).
Ny fahafatesana dia mifanohitra amin'ny fiainana. Maty ny fanahy ary levona ny fanahy (ny hery velona): "Aza matoky ny olona ambony Na ny zanak’olombelona izay tsy mahavonjy. Miala ny ainy, ary miverina amin’ny tany nakana azy izy, Ka androtr’iny ihany, dia foana ny eritreriny" (Salamo 146:3,4, Mpitoriteny 3:19,20, 9: 5,10).
Hisy fitsanganan'ny marina sy ny tsy marina: "Aza gaga amin’izany fa ho avy ny fotoana handrenesan’izay rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy ireo. Koa izay nanao ny tsara dia hatsangana ho amin’ny fiainana, fa izay zatra nanao ratsy kosa hatsangana ho amin’ny fanamelohana" (Jaona 5:28,29, Asan'ny Apôstôly 24:15). Ny tsy rariny dia hotsaraina noho ny fihetsika nataony nandritra ny fitondran'ny 1000 taona (fa tsy noho ny fihetsika nataon'izy ireo taloha): "Ary nahita seza fiandrianana fotsy lehibe aho, ary hitako ilay nipetraka teo amboniny. Nandositra tsy ho eo anatrehany ny tany sy ny lanitra, ary tsy nisy toerana ho azy ireo. Ary hitako ny maty, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anoloan’ny seza fiandrianana, dia nisy horonam-boky novelarina. Fa nisy horonam-boky iray koa novelarina, dia ny horonam-bokin’ny fiainana. Ary ny maty dia notsaraina araka izay voasoratra tao amin’ireo horonam-boky, araka izay nataon’izy ireo. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy, ary ny fahafatesana sy ny Fasana namoaka ny maty tao aminy, ka samy notsaraina araka izay nataony avy izy ireny" (Apokalypsy 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).
Olona 144 000 ihany no hiaraka amin'i Jesoa Kristy any an-danitra: "Ary hitako ny Zanak’ondry nitsangana teo amin’ny Tendrombohitra Ziona, ary nisy efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy niaraka taminy, nanana ny anaran’ny Zanak’ondry sy ny anaran’ny Rainy voasoratra teo amin’ny handrin’izy ireo. Ary nahare feo avy any an-danitra aho, toy ny feon’ny rano be sy toy ny feon’ny kotroka mafy. Ny feo izay reko dia toy ny an’ny mpihira izay nampiaraka ny hirany tamin’ny harpa sady nitendry harpa. Ary nihira toa hira vaovao teo anoloan’ny seza fiandrianana sy teo anatrehan’ny zavamananaina efatra sy ny anti-panahy izy ireo. Ary tsy nisy nahay izany hira izany, afa-tsy ny efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy, izay novidina avy teto an-tany. Izy ireo no tsy nandoto tena tamin’ny vehivavy, fa virjiny izy raha ny marina. Izy ireo no nanaraka foana ny Zanak’ondry na taiza na taiza nalehany. Novidina avy teo amin’ny olombelona izy ireo ho voaloham-bokatra ho an’Andriamanitra sy ny Zanak’ondry, ary tsy nisy lainga hita teo am-bavany sady tsy nisy tsiny ireo" (Apokalypsy 7:3-8; 14:1-5). Ny vahoaka be voalaza ao amin'ny Apokalypsy 7:9-17 dia ireo izay ho tafavoaka velona amin'ny fahoriana lehibe ary hiaina mandrakizay ao amin'ny paradisa eto an-tany: "Taorian’izany, dia nahita aho, ary nisy vahoaka be tsy tambo isaina, avy tamin’ny firenena sy foko sy vahoaka ary fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan’ny seza fiandrianana sy teo anatrehan’ny Zanak’ondry, nanao akanjo fotsy lava, ary nisy sampana palmie teny an-tanany. (...) Koa namaly azy avy hatrany aho hoe: “Ianao no mahalala, tompoko.” Ary hoy izy tamiko: “Ireo no avy tamin’ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry. Izany no antony ijoroany eo anoloan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra. Ary manao fanompoana masina ho azy andro aman’alina ao amin’ny tempoliny izy ireo. Ary Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana dia hamelatra ny tranolainy eo ambonin’izy ireo. Tsy ho noana na hangetaheta intsony ireo, ary tsy hamely azy ny masoandro na ny hafanana mandoro, satria ny Zanak’ondry, izay eo akaikin’ny seza fiandrianana, dia hiandry azy ireo toy ny ataon’ny mpiandry ondry, ka hitarika azy ho any amin’ny loharanon’ny ranon’aina. Ary hofafan’Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin’ny masony" (Apokalypsy 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).
Miaina ny andro farany isika izay hiafara amin'ny fahoriana lehibe (Matio 24,25, Marka 13, Lioka 21, Apokalypsy 19:11-21): "Raha mbola nipetraka teo amin’ny Tendrombohitra Oliva izy, dia nanatona azy mitokana ny mpianany, ka niteny hoe: “Lazao aminay hoe rahoviana no hitranga izany, ary inona no ho famantarana ny fanatrehanao sy ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity? (...) Fa amin’izany fotoana izany, dia hisy fahoriana lehibe izay mbola tsy nisy toa azy hatramin’ny niandohan’izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy intsony" (Matio 24:3,21) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).
Ho paradisa eto an-tany: "Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra taloha sy ny tany taloha, ary tsy nisy ranomasina+ intsony. Hitako koa ilay tanàna masina, dia i Jerosalema Vaovao, nidina avy any an-danitra avy any amin’Andriamanitra sady efa voaomana tahaka ny ampakarina mihaingo hihaona amin’ny vadiny. Tamin’izay aho dia nahare feo mafy avy teo amin’ny seza fiandrianana, nanao hoe: “Eo amin’ny olombelona ny tranolain’Andriamanitra, ary izy hiara-mitoetra amin’izy ireo, ary ireo ho olony, ka Andriamanitra mihitsy no ho eo aminy. Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha" (Isaia 11,35,65, Apokalypsy 21:1-5) (The Release).
Andriamanitra dia namela ny ratsy. Izany dia nanome valiny ny fanambin'ny devoly ho amin'ny maha-ara-dalàna ny fiandrianan'i Jehovah (Genesisy 3:1-6) (Satan Hurled). Ary koa hanome valiny ny fiampangan'ny devoly momba ny fahitsian'ny olombelona (Joba 1: 7-12; 2: 1-6). Tsy Andriamanitra no mahatonga ny fijaliana: "Rehefa misy fitsapana, dia aoka izy tsy hilaza hoe: “Fitsapana avy amin’Andriamanitra izao.” Sady tsy azo tsapaina amin-javatra ratsy mantsy Andriamanitra, no tsy mitsapa na iza na iza amin’izany koa" (Jakoba 1:13). Ny fijaliana dia vokatry ny antony efatra lehibe: Ny devoly dia mety hitarika ny fijaliana (fa tsy foana) (Joba 1: 7-12; 2: 1-6). Ny fijaliana dia vokatry ny fahotana nataonay tamin'ny filalaovana an'i Adama izay mitondra antsika amin'ny fahanterana sy ny aretina ary ny fahafatesana (Romana 5:12, 6:23). Ny fijaliana dia mety ho vokatry ny fanapahan-kevitra ratsy ataon'ny olona (Deoteronomia 32: 5, Romana 7:19). Ny fijaliana dia mety vokatry ny "fotoana tsy ampoizina sy ny zava-mitranga" izay mahatonga ny olona ho diso toerana amin'ny fotoan-tsarotra (Mpitoriteny 9:11). Isika dia tsy "voatendry" hanao ny tsara na ny ratsy, fa amin'ny alalan'ny safidy malalaka dia misafidy ny hanao "tsara" na "ratsy" (Deoteronomia 30: 15).
Tsy maintsy manompo ny tombontsoan'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Natao batisa ary hanao araka izay voasoratra ao amin'ny Baiboly: "Koa mandehana àry, ataovy mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin’ny anaran’ny Ray sy amin’ny anaran’ny Zanaka ary amin’ny anaran’ny fanahy masina. Ampianaro izy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary homba anareo foana aho, mandra-pahatongan’ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity" (Matio 24:14; 28: 19,20) (The Baptism) (The Good News; The End of Patriotism).
Ny fankahalana dia voarara: "Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao aminy" (1 Jaona 3:15). Mamono olona, dia voarara namono olona noho ny antony manokana, vono olona amin'ny alalan'ny fitiavan-tanindrazana ara-pivavahana na ny fitiavan-tanindrazana dia voarara-panjakana "Fa hoy i Jesosy taminy: “Avereno amin’ny tranony ny sabatrao, fa ho fatin’ny sabatra izay rehetra mampiasa sabatra" (Matio 26:52) (The End of Patriotism).
Aza mangalatra: "Aoka ny mpangalatra tsy hangalatra intsony, fa aoka kosa izy hiasa mafy, ka hampiasa ny tanany hanaovana asa tsara, mba hanan-javatra hozaraina amin’izay sahirana" (Efesianina 4:28).
Ny lainga dia voarara: "Aza mifandainga ianareo. Esory ny toetra taloha mbamin’ireo fanao niaraka taminy" (Kolosiana 3:9).
Fandrarana hafa ny Baiboly:
"Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay ny tsy hanampy enta-mavesatra anareo, afa-tsy ireto zavatra tsy maintsy hotandremana ireto: Ny mifady ny zavatra natao sorona ho an’ny sampy, sy ny ra sy ny biby nokendaina ary ny fijangajangana. Hahasoa anareo ny mitandrina tsara ireo zavatra ireo. Mirary soa ho anareo izahay!" (Asan'ny Apostoly 15:19,20,28,29).
Zavatra amin'ny sampy no voarara: Ireo dia "zavatra" mifandraika amin'ny fombafomba ara-pivavahana mifanohitra amin'ny Baiboly, fankalazana ny fetin'ny mpanompo sampy. Izany dia mety ho ara-pivavahana fanao talohan'ny hamono na ny fihinanana ny hena: "Hano foana izay rehetra amidy eny amin’ny tsena fivarotan-kena, fa aza manontany noho ny feon’ny fieritreretanareo. Fa “an’i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy.” Raha misy tsy mpino manasa anareo ka te ho any ianareo, dia hano izay rehetra aroso eo anoloanareo, ka aza manontany sao hampikorontana ny feon’ny fieritreretanareo izany. Fa raha misy kosa miteny aminareo hoe: “Zavatra natolotra ho sorona ity”, dia aza mihinana noho ilay nampahafantatra anareo sy noho ny feon’ny fieritreretana. “Feon’ny fieritreretana”, hoy aho, nefa tsy ny anao, fa ny an’ilay olona. Fa nahoana ny fahafahako no tsarain’ny feon’ny fieritreretan’ny olon-kafa? Raha mihinana aho sady misaotra, nahoana aho no haratsina amin’izay anaovako fisaorana?" (1 Korintiana 10: 25-30).
"Aza manaiky hiray zioga amin’ny tsy mpino. Fa inona no ifandraisan’ny fahamarinana sy ny fandikan-dalàna? Ary inona no iombonan’ny mazava sy ny maizina? Inona no ifanarahan’i Kristy sy Beliala? Inona no zavatra iombonan’ny mino amin’ny tsy mpino? Ary inona no ifanarahan’ny tempolin’Andriamanitra amin’ny sampy? Fa tempolin’ilay Andriamanitra velona isika, araka ny voalazan’Andriamanitra hoe: “Honina eo amin’izy ireo aho+ sady ho eo aminy, dia ho Andriamaniny aho, ary izy ho oloko.” “‘Koa mivoaha eo aminy ianareo, ary misaraha aminy’, hoy i Jehovah, ‘ary aza mikasika intsony izay maloto’”, “‘dia handray anareo aho.’” “‘Ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy zanako vavy’, hoy i Jehovah, ilay Mahery Indrindra" (2 Korintiana 6:14-18).
Aza manompo sampy. Ny anankiray dia tsy maintsy manimba ny sampy rehetra na sary, hiampita, sarivongana ho an'ny fivavahana: "Midira amin’ny vavahady tery. Fa lehibe sady malalaka ny lalana mankany amin’ny fandringanana, ka maro no miditra any. Tery kosa ny vavahady ary ety ny lalana mankany amin’ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. “Mitandrema amin’ny mpaminany sandoka tonga eo aminareo, fa mitafy hodi-janak’ondry izy ireny nefa ao anatiny ao amboadia mpiremby. Ny voa izay vokariny no hahafantaranareo tsara azy ireny. Mioty voaloboka na aviavy eny amin’ny tsilo ve ny olona? Toy izany koa fa ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara, ary ny hazo ratsy rehetra kosa mamoa voa ratsy. Tsy mety mamoa voa ratsy ny hazo tsara, ary tsy mety mamoa voa tsara ny hazo ratsy. Hokapaina ka hatsipy any anaty afo ny hazo rehetra tsy mamoa voa tsara. Koa ny voa izay vokariny àry no hahafantaranareo tsara an’ireny olona ireny. “Tsy izay rehetra milaza amiko hoe: ‘Tompo ô, Tompo ô’, no hiditra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko izay any an-danitra. Maro no hilaza amiko amin’izany andro izany hoe: ‘Tompo ô, Tompo ô, moa ve izahay tsy efa naminany tamin’ny anaranao, sy efa namoaka demonia tamin’ny anaranao, ary efa nanao fahagagana maro tamin’ny anaranao?’ Hotsoriko aminy anefa amin’izay fotoana izay hoe: Tsy fantatro mihitsy ianareo! Mialà amiko, ianareo mpandika lalàna" (Matio 7: 13-23). Aza mampiasa ny spiritisma: sikidy, majika, astrolojia ... Tokony hamotika ny zavatra rehetra mifandraika spiritisma: "Ary maro tamin’ireo zatra nampiasa herin’ny maizina no nanangona ny bokiny ka nandoro izany teo anatrehan’ny rehetra. Dia natambatr’izy ireo ny tokom-bidin’izany ka hitany fa farantsa volafotsy dimy alina. Koa niroborobo be àry ny tenin’i Jehovah, sady tena nahery" (Asa 19:19, 20).
Aza mijery sarimihetsika na sary vetaveta, na herisetra sy maharikoriko. Mialà amin'ny filokana, fampiasana zava-mahadomelina, toy ny marijuana, betel, sigara, fisotroana tafahoatra: "Koa miangavy anareo aho, ry rahalahy, noho ny fangoraham-pon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho sorona velona sy masina ary ankasitrahan’Andriamanitra. Izany dia fanompoana masina ampiasanareo ny sainareo" (Romana 12:1, Matio 5:27-30, Salamo 11:5).
Fijangajangana ara-nofo (fijangajangana): ny fanitsakitsaham-bady, ny firaisana ara-nofo tsy manambady (lahy / vavy) , lehilahy miray amin'ny lehilahy: "Tsy fantatrareo angaha fa tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra ny olona tsy marina? Aza manaiky ho voafitaka ianareo: Fa na mpijangajanga, na mpanompo sampy, na mpanitsakitsa-bady, na lehilahy manaiky hanaovan-dehilahy firaisana, na lehilahy miray amin’ny lehilahy, na mpangalatra, na olona manana faniriana tsy mety afa-po, na mpimamo, na mpanevateva, na mpanao an-keriny, dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra" (1 Korintiana 6:9,10). "Aoka ho mendri-kaja eo imason’ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandrianan’ny mpivady, fa homelohin’Andriamanitra ny mpijangajanga sy ny mpanitsakitsa-bady" (Hebreo 13: 4).
ny olona tsirairay ao anatin'ity toe-javatra izay te hanao ny sitrapon'Andriamanitra ity, dia tsy maintsy mampihatra ny toe-javatra misy azy, "mijanona" miaraka amin'ny vadiny voalohany izay nanambady (1 Timoty 3: 2) "mpivady iray vehivavy "): "Koa vonoy ireo fironan-dratsy ao amin’ny rantsambatanareo, dia fijangajangana, fahalotoana, filan’ny nofo, fanirian-dratsy, ary ny fitsiriritana izay fanompoan-tsampy" (Kolosiana 3: 5).
Aza mihinan-dra, na akory fampidiran-dra: "Fa izao ihany no tsy azonareo hanina: Ny nofo misy aina, izany hoe mbola misy ra" (Genesisy 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).
"Fa ny ventin-kanina kosa dia ho an’ny olona matotra, izay manana fahaiza-misaina efa nozarina hanavaka ny tsara sy ny ratsy, satria nampiasaina" (Hebreo 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).